Suarez, Neymar, Modric, Oblak Iyo Jackson Oo Hoggaaminaya Kooxda Toddobaadka Ee Champions League
HomeChampions LeagueSuarez, Neymar, Modric, Oblak Iyo Jackson Oo Hoggaaminaya Kooxda Toddobaadka Ee Champions League
16/04/2015 Abdiwahab Ahmed
Waxa la shaaciyey 11kii ciyaartoy ee ugu wanaagsanaa ciyaarihii Champions League ee xalay iyo habeen hore, kuwaas oo laga sameeyey koox dhamaystiran.
Goolhaye: Jan Oblak — Atletico Madrid
Goolhayahan ayaa muujiyey ciyaartii ay kooxdiisu barbar dhaca 0-0 la gashay Real Madrid ciyaar wanaagsan. Waxa uu badbaadiyey kubado la filayey in ay goolal noqon doonaan khaasatan kubad uu qaybtii hore ula tegay Gareth Bale oo uu si mucjiso leh uga badbaadiyey.
Difaaca Midig: Danilo — Porto
Qayb weyn ayuu ka ciyaaray guushii ay Porto ka gaadhay Bayern Munich ee ay ku garaacday 3-1. Inkasta oo uu bisha June tegi doono garoonka Bernabeu oo uu heshiis la galay Real Madrid, haddana marka aad eegto qaab ciyaareedkiisu waxa uu madax xanuun ku riday tababare Pep Guardiola iyo kooxdiisa Munich oo awoodi kari waayey in ay dhinaca midig ee Porto ay kubadda kala soo galaan.
Difaaca Dhexe: Sergio Ramos — Real Madrid
Waxay u muuqataa in uu caqli ahaan iyo ciyaar ahaanba koray. Difaacyahanka Sergio Ramos wuxuu kubadda ka dhaariyey weeraryahannada Atletico Madrid kulankii Calderon Stadium, waxaanu ku mutaystay amaan ballaadhan. Waxa uu soomiyey Mario Mandzukic oo suxul uu ku dhuftayna wejiga qarxiyey, laakiin markii dambe la ogaaday in aanu ogaan ugu dhufanin.
Difaaca Dhexe: Diego Godin — Atletico Madrid
Weeraryahannada Real Madrid waxay garoonka kala baxeen af qallalan iyo iyagoo aan wax gool ah dhalinin. Mahaddaas waxa qayb weyn iska leh Diego Godin. Mar walba waxa uu ahaa halbowlaha ugu muhiimsan ee difaaca kaas oo madax iyo lugba u isticmaalayey in uu goolkiisa kubadda ka ilaaliyo.
Difaaca bidix: Patrice Evra – Juventus
Da’diisu waa 34 jir, haddana marka la eego ciyaartii uu soo bandhigay kulankii Juventus 1-0 ku garaacday Monaco, waxa uu la mid ahaa 20 jir. waxa uu muujiyey kalsooni iyo ciyaar wanaag.
Dhexda: Blaise Matuidi — PSG
PSG si fiican ayaa loogu tuntay, waxa la arkayey xiddigaha Barcelona oo dhinac walba kaga imanaya iyo waliba Suarez iyo Neymar oo noqday daad ay xidhi kari waayeen reer PSG oo dhan. Haddana, Blaise Matuidi culayskaas oo dhan oo saaran, haddana waa uu muuqday. Waxa uu sameeyey fursado, halgan ayuu khadka dhexe kula galay Iniesta iyo Rakitic. Inkasta oo uu maqnaa Marco Verratti oo ganaax ahaa, haddana Matuidi marna muuu qarsoomin intii ay ciyaartu socotay, waxaana muuqatay isfaham u dhexeeyey Yohan Cabaye iyo Andrien Rabiot.
Dhexda: Casemiro — Porto
Waxa uu u dhashay Brazil, amaah ayaanugu ciyaaraa Porto oo waxa uu ka tirsan yahay ciyaartooyada Real Madrid. Bandhig ciyaareedkiisii kulankii Bayern MUNICH lagu bahdilay, waxa uu Casemiro ahaa ragga ugu cadcadaa garoonka. Waxa uu waddo ku riday oo uu khadka dhexe kaga awood batay ciyaartooyada Xavi Alonso, Thiago Alcantara iyo Pilipp Lahm, kuwaas oo dhamaantood iyagoo madaxa foorarinaya garoonka ka baxay.
Khadka dhexe: Luka Modric — Real Madrid
Qaab ciyaareedka Luka Modrid ee kulankii Atletico Madrid heer sare ayuu ahaa, wax kasta oo laga filayey in uu sameeyona waa uu qabtay. Baasas gaagaaban isku xidhka kooxda ayaa si fiican loo xusi karaa.
Weerarka: Luis Suarez — Barcelona
Gool ayuu ka dhex samaystay labada lugood ee David Luiz, waxa uu u muuqday nin ay u sahlan tahay in uu si fiican isaga dhex ordi karo difaaca kala daadsanaa ee PSG, waxaanu kooxdiisa Barcelona u dhaliyey laba gool.
Weerarka: Neymar — Barcelona
Si la mid ah Suarez, Neymar waxa uu u ciyaaray si fiican, waxa uu u dhaliyey gool qurux badan, qayb weyn ayaanu ku lahaa ciyaarta. Waxay is fahmayeen Lionel Messi oo ay kubbad degdeg badan oo gaagaaban iyo dhaadheerba isku dhiibayeen, dhaqaaqiisuna wuxuu ka caawiyey Barcelona in iyada oo marti ah ay ku badiso 3-1.
Weerarka: Jackson Martinez — Porto
Laf-dhuun gashay ayuu ku noqday Bayern Munich. Bilowgiiba kubadda ayuu ka boobay Xavi Alonso, waxaanu la hor tegay goolka laakiin khalad uu ku galay Neuer ayaa lagu abaalmariyey rikoodhe, kaas oo uu gool u beddelay Quaresma. Mar kale ayuu ka faa’iidaystay khalad uu sameeyey Boeteng oo kubad madaxa uu la waayey intuu ka daba qaatay uu shabaqa dhex dhigay. Intaas kuma koobnayn ee waxa uu ahaa haad duulaya oo kubbadaha ku qabsanaya difaaca Munich. Shaki la’aan waxa uu ahaa weeraryahankii ugu wanaagsanaa Champions League Salaasadii iyo Arbacadii.
NB: Kooxdan Waxa soo ururiyey khubradaha ESPN.
Aston Villa vs Sunderland AFC 2-1 & All Goals And Highlights
Higuain oo Iska Waayay Liiska Xulka Qaranka
03/10/2017 Abdiwahab Ahmed
Vardy Iyo Ranieri Oo Casaan Qaatay Ciyaar Leicester Ay Dirqi Kaga Bed-baaday Stoke